Welleeggaa Yuunivarsiitiin Afaan Oromoo akka hin bareefamne goodhan.
Yuunivarsiitiin Wallaggaa Mooraan isaa ijaaramaa jira. Haata'u iyyuu malee guyyaan eebbaa sanbata Xiqqaa 29/06/2013 nu fuulduraa kana waanta'eef, keessummoota...........simachuuf oliifi gadi fiigaa jiru. Haata'u malee balballi mooraan Yunverstii. Maqalee, afaan tigriffan, Makhalee Yunverstii jedhama, Gondor Yunverstii jedhama, Amboon, Yuunivarsiitii Amboo jedhamee michichila balbala isaa(Taappellaa) isaa irratti Afaan Oromo, Amaariffa, Ingiliffaan duraa duubaan hojjetamaa jira!..
Haata'u malee Yuuniverstiiin keenya keessatti immoo, Balballi isaa, kan bocamee hojjetamaa jiru, Barataa qomoon isaa Amaara ta'e Conistruction waggaa 3ffaa kanta'e; Tasfaayee jedhamuun hojetamaa jira!... Jalqaba irratti afaan Amaaraa Welleeggaa Yunive.jedhee lammaffa irratti immoo Afaan Ingiliffaan barreeffamee jira! Afaanni Oromoo immoo keessuma hin jiru! barattootni baayyeenis murtoo dhuunfaa dhuunfaa isaaniitiin akka guyyaa eebbaa galma hingalle odeessaa jiru.
Waan kun atataman akka siiratuuf sadarka tokkofa irrati Yuuniverstii Welleeggaa Jeedhamee Afaan Oromoon akka Bareefamuu kun ta'uu bana bala gudaan akka dhalatuuf, guyya safaa akka gubamuu goona murteen jeedhu baratoon murtefatan jiru.
Goochaan kun amoo ta’ee jeedhamee Ijoolee Oromoo jeeqummasaa itti humani hiduu fi ebba irraa ala goochuuf deemuu. Kaanaafuu dimmaa kana Mootummaa Naannoo Oromiyaa fi Preezdaantiin Oromiyyati iyyata dhiyeesuu baratooni qoophi irra jiru, kun ta’uu banan garuu tarkanfi cimmaa akka fudhatan akeekachisan jiru.
Yaakka fi shiira Ilmaan Habasha Raawwatan irraa of eguu qabna.
Habashoon yeeroo hunda Jeequmsaa Baratootaa Oromoo irrati kan qabsisan gaafa ijoolee Oromoo Qoormaa egaluuf deeman ykn amoo gaafa isaa Ebbifamuu deemandha. Yuuniversity Maqale keessati baratooni Oromoo wagga 4-5 baratacha turan guyya Ebba isaan jala jeequmsaa itti humdhan baratoon Oromoo 70 Waraqa Ragga (Diigrii) University xumuruu isaa akka dhabaan goodhaman turan. Baratooni yeero sun Diggirri isaan dhorkaman biyya keessati ilee hojii akka hin hojeene goodhaman Hidhaman Torchi ta'aan biyya ari’aman jiru. Kanaafuu Baratoon Oromoo Kiyyoo Habashan Kiyeeseef seenuunin of takkalan harka diinati Kufuu hin qaban.
Baratooni Oromoo Guyya Sanbata dhufuu Naggatiin Ebba isaani erga xumuratan booda wayee dhimma sun gaafachuu qabu malee Ebbaa isaa guyya lama hafee irrati jeequmsa tokko keesssa seenuu hin qaban. Kun amoo soodaaf utuu hin tanee kayyoo diini qoophese keessa galuu barbachisa miti. Gowwa ta’uu hin qabnuu. Dargagooni Oromoo Dhamsaa GPO kan dhaga'uun Ebbaa isaan naggan akka xumuratan dhammanaf. Haawwasi Oromoo Maggalaa Nekemte Jiruu Tufii Mootuummaan kun Oromoo irrati qabuu hubachuun Bulchiisa university Weleeggaa fi Mootummaa Naannoo Oromiya ofiin jeedhu sun irrati qabsoo akka gootan isiin yaadachifna.
Habashan Oromiyya keessa ba’uuu qabdi